Wasiirka Cadaalada Oo Sheegay Inaanay Masiirka Awdal Aanay Go’aamin Karin Shakhsiyaad Qurbo-joog Ahi | Somaliland.Org
Wasiirka Cadaalada Oo Sheegay Inaanay Masiirka Awdal Aanay Go’aamin Karin Shakhsiyaad Qurbo-joog Ahi
April 25, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Garsoorka Somaliland Prof. Ismaaciil Muumin Aare, ayaa maanta jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay shakhsiyaad Somaliland diid ah oo ka soo jeeda qurbo jooga gobolka Awdal, kuwaasi oo sheegay inay qorshaynayaan sidii Maamul gaar ah ay ugu sameyn lahaayeen Gobolka Awdal.
Wasiirka Cadaalladda oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa wuxuu sheegay inaanay iraadada shacbiga Gobolka Awdal aanay majaro habaabin Karin shakhsiyaad qurbo joog ahi.
Wasiirku wuxuu sheegay in dadweynaha Gobolka Awdal ay kaalin wax ku ool ah ku lahaayeen Somaliland illaa xiligii gobinimo doonka iyo marxaladihii dib ula soo noqoshadii madax banaanida Somaliland ee shirkii beelaha Somaliland ku yeesheen sanadkii 1991-kii Magaalada Burco ee xarunta Gobolka Tog-dheer.
Prof. Ismaaciil Muumin Aar waxa uu sheegay inaan mugdi la gelin Karin mowqifka Somalilandnimo ee shaciga gobolka Awdal, waxaanu tilmaamay in Magaalada Boorame lagu qabtay sanadkii 1993-kii shirkii labaad ee beelaha Somaliland kaasi oo lagu soo doortay maamulkii uu Madaxweynaha ka ahaa Marxuum- Maxamed Ibraahim Cigaal isla markaana uu Madaxweyne Ku Xigeen ka ahaa Mujaahid C/Raxmaan Aw- Cali Faarax.
Wasiirku wuxuu sheegay in muddo sideed sanadood ah uu Somaliland Hoggaaminayay Madaxweyne ka soo jeeday Gobolka Awdal , imikana ay u hoggaansamayaan Hoggaanka dalka. Waxaanu xusay in shakhsiyaadka qurbo jooga ah ee dibadaha ka hadaaqayaa aanay ka tallin Karin masiirka siyaasadeed ee reer Awdal.
Prof. Ismaaciil Muumin Aarre wuxuu u soo jeediyay shakhsiyaadka dhalinyarada ah ee Somaliland diidka ahi ay dadkooda wax ka soo taraan abaaraha ba’an ee dalka ka jira, waxaanu ku dooday in cidii wax ka tabanaysa xukuumadda uu ka tirsan yahay ay la xidhiidhaan dawlada dalka ka jirta.
“Shacbiga reer Awdal Somalilandnimadooda muran kuma jiro oo Somaliland reer Awdal baa leh cidi kama laha, cidna uma dabo fadhiisanayayaan, waxyaabaha ay tabanayaanna Anagaa xukuumaddii ugu jirna oo matalayna Xildhibaanadii iyo waxgaradkii ayaa qoray tabashadoodii waxaana loo gudbiyay Madaxweynaha Somaliland,”ayuu yidhi Md. Ismaaciil Muumin Aare.
Wasiirku waxa uu u soo jeediyay dadka ka dambeeya dhalinyarada qurbo jooga ahi ay wax kale ka waantoobaan “Waxaan leeyahay raga dhalinyarada yar yar ee qurbaha ku dhashay marin habaabinaya ee ku gabraaranayoow wax kale raadso waxani idiin suurtoobi maayaane’e.
Previous PostMadaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Oo Kormeer Ku Soo Maray Qaar Ka Mid Ah Haayadaha DawladaNext PostLaba Sarkaal Oo Ka Tirsan Warfaafinta Oo Beeniyay Is Faro-saareen Iyo Nuxurka Is-difaacooda	Blog